Kedu ihe bụ atụmanya nke PVC plastic na-ebili elu?
Plasticlọ plastik PVC n'ihi iji ihe eji eme ihe bụ PVC na-agbanwe agbanwe na gburugburu ebe obibi, na usoro nke gburugburu ebe obibi taa, nwere ike ịsị na ọ bụ ụlọ ọrụ ọwụwa anyanwụ. Na-ele anya n’ọdịnihu, ị ga-enwe ebe a ga-etinye PVC plastic. Plastickwanyere plastic n'ala ga -...
A na-ejikarị PVC eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ala, nke ọkpọkọ na profaịlụ na-anọchi anya ya. Dabere na ọnụọgụ nke ozi Longzhong, na ngwa mgbada nke PVC na 2018, ọnụọgụ nke ọkpọkọ na profaịlụ bụ 27% na 24% n'otu n'otu. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mana enwere ụlọ ọrụ na ...
Eburu amuma na nyocha banyere onodu ugbua na mmepe nke ahia PVC nke China na 2020
PVC bụ otu n'ime ngwaahịa chlorine kachasị ukwuu na China, oriri oriri chlorine na-ewekwa 40% nke mkpokọta chlorine na China, ọ bụkwa ngwaahịa bụ isi iji dozie alkali chlorine. Dabere na data ahụ, site na njedebe nke 2019, ikike zuru ezu nke mmepụta dome ...
Banyere nkwalite mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ esenidụt
Na ọbịbịa nke afọ ọhụrụ 2020, zutere Corvi-19, Ngosiputa ngosi na ngosi ngosi na enweghị ike ịkpọ ndị ala ọzọ ka ha bịa na ụlọ ọrụ anyị, yabụ, ọ bụ nnukwu nsogbu anyị zutere na mbupụ mbupụ. Site n'enyemaka na nkwado nke HeBei GuoRui Information Technologe Co., ltd, anyị kpọsara ...
Pet Ogbo ulo, Anu anu ogu anu ulo Pet, Pvc Ogbo flooring, Ala Kapetị Roll, Pvc Kapetị, Ala,